China Vinyl / Neoprene Dumbbells vagadziri uye vanotengesa | Meiao
Kuwedzera kupokana kushoma mukushanda kwako kunogona kuwedzera kupisa kwemafuta uye zvakare mhasuru toni. Iyi dumbbell ine hushamwari, yakachengeteka uye yakagadzikana, yakagadzirirwa nemaoko mashoma uye kushomeka kushoma mupfungwa. Iine vinyl nyoro / neoprene yakaputirwa dhizaini, aya madhiri ndiyo sarudzo yakanaka kune vanhu vatsva kuhuremu kana chero munhu anoda kuwedzera kuramba kwechiedza kune kwavo kudzidziswa. Saka dumbbell iyi inokodzera chaizvo vakadzi nevana.
Nezve maratidziro, isu tine makirogiramu: 0.5kg, 1kg, 1.5kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg
Isu tinoitawo mapaundi, isu tine 2lb, 3lb, 4lb, 5lb, 6lb, 7lb, 8lb, 9lb, 10lb, 12lb, 15lb.
Iwo mavara akasiyanasiyana uye akanaka kwazvo. Mavara enguva dzose atinawo akatsvuka, pink, yepepuru, yebhuruu, girini ......
Iwe unogona zvakare kugadzirisa yako pachako LOGO pane dumbbells.
Nekuda kwechimiro chavo chakapeteredzwa, iyo Vinyl / Neoprene Dumbbells hadziumburuke kana yaiswa pasi.
Iyo vinyl / neoprene yakavhara misoro inogumira kupfeka uye kubvarura kune iyo dumbbells ichiita kuti ive yakasimba uye yekupukuta-yakachena.
Iko kupfeka kunoita kuti dumbbells inyararire kana yaiswa pasi ichibatsira kudzikisira ruzha uye kuchengetedza yako Workout pamusoro.
Pasuru: Firimu repurasitiki rinovhara pamusoro peichi chigadzirwa, isa bhokisi uye wobva washandisa pallet
Yedu Services & Simba
Yakanaka Hunhu, Set iwe Kuparadzaniswa
1. Uye inogona kuvimbisa zvizere chigadzirwa chemhando yepamusoro uye yakanakisa sevhisi sevhisi.
2. Tine huwandu hwakazara hwezvigadzirwa zvevatengi zvavanosarudza, izvo zvinonyanya kukodzera vatengi kuti vagadzire rese cheni yeindasitiri yekusimudzira, uye isu tichapa mamwe mazano ekubatsira ekutenga zvinoenderana nevatengi 'nzira dzekutengesa uye mamiriro ekutengesa.
3, Isu tinotsigira zvigadzirwa zvakagadzirwa, chero bedzi iwe uchida, tinogona kubudirira. Yakanakisa sevhisi yakagara iri uzivi hwedu
Pashure: Jinsu ketera bhero
Zvadaro: Meiao Fitness dema kukandira simbi ketera bhero SET
Wholesale zvakachipa weightlifting yepamusoro esimende du ...
China Custom mavara hwakasimba Cast simbi Vinyl Ket ...
Deluxe 20kg Gym chinjika dumbbell yakatarwa workou ...
High kudiwa zvigadzirwa Wholesale raive nebutiro 10kg fitne ...
2021 Hot kutengesa zvigadzirwa chinjika maviri chidimbu ...
New kusvika chigadzirwa keturu zvihwitsi ruvara ruvara wholesal ...